लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई बचाउन पार्टी सक्षम छः कोइराला - News Birat
लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई बचाउन पार्टी सक्षम छः कोइराला
मोरङ, पस १९–नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई बचाउन आफ्नो पार्टी सक्षम रहेको जनाएका छन्। नेपाल तरुण दल क्षेत्र नं ६ मोरङद्वारा शनिवार आयोजित तरुण भेला तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै उनले कांग्रेस लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने शक्तिसँग जुध्न तयार रहेको बताए।
केन्द्रीय सदस्य डा. कोइरालाले सरकारले देशमा महँगी र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी आम जनतालाई अनुभूति दिने किसिमको काम गर्न सुझावपनि दिए। कोइरालाले जनताले सरकारलाई खोज्न नपरोस् भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै उनले युवा शक्तिले देशलाई अग्रगामीतर्फ लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
शनिबार, १९ पुष २०७६, २२:४६ January 4, 2020 मा प्रकाशित